VACC300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၃၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
စံချိန်စံညွှန်း ISO 9001:2015
မော်ဒယ်- VACC 300
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC300
Applying the most advanced water filtration technology of the United States, Viet An’s VACC300 Purified water filtration system enables changing water from various sources to purified water, ensuring food hygiene and safety.
US ရဲ့ ခေတ်အမီဆုံး ရေစစ်ထုတ်တဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် VACC300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးသောစနစ်က ဘယ်လိုအရင်းအမြစ်က ရေတွေကိုမဆို ရေသန့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရမှုလည်း ရှိပါတယ်။
Members of Viet An Company Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ
It means that the system is suitable for the water in both urban and rural sources.
Are you worried that the existing water source that your family is using is not safety? Are you worried about your health issues related to water quality? Are you looking forarelevant product that can process and remove impurities from the water, turn well water, groundwater into pure water and haveahigh durability?
ဆိုလိုတာက ဒီစနစ်က မြို့ပေါ်မှာရော ကျေးလက်ဒေသတွေမှာပါ အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ မိသားစု ယခုသုံးနေတဲ့ ရေအရင်းအမြစ်က စိတ်မချရဘူးလို့ ထင်နေပါသလား?
ရေရဲ့ သန့်ရှင်းမှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး စိုးရိမ်နေပါသလား? ရေက အညစ်အကြေးတွေ ဖယ်ရှားရန် ရေတွင်းထဲက ရေတွေ မြေရောက်ရေတွေကို ရေသန့်ကိုပြောင်းစေရန် ကြာရှည်ခံရန် သင့်တော်တဲ့ ပစ္စည်းကို ရှာနေပါသလား?
All your concerns can be released immediately with our VACC300 -300LPH bottled water filtration line .
သင်စိုးရိမ်နေတာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ VACC300-300LPH ရေစစ်ထုတ်ပေးသောလိုင်းက ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
In addition to this capacity of 300L per hour, we also offerawide range of capacity with other models. If you are interested in this super-profitable industry of bottled water, below isacloser look at the details: https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc
တစ်နာရီမှာ ၃၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပြင် ပိုပြီးတော့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် အခြားရွေးချယ်စရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စက်ရုံအတွက် လုံးဝ အကျိုးဖြစ်စေမယ့် ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuocမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
1. Raw water filtration process
First, the water will be pumped from the well into the multifunctional treatment tank and sludge treatment tank before it is sent to the filtration tank.
ပထမဆုံး ရေကို ရေတွင်းထဲကနေ ရေပြုပြင်ပေးဖို့ များစွာအသုံးဝင်သော တိုင်ကီထဲကို စုပ်တင်ပါမယ်။ ဒါမတိုင်ခင် အညစ်အကြေးပြုပြင်ပေးတဲ့ တိုင်ကီကို စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ တိုင်ကီဆီ ပို့ပေးရပါမယ်။
The intake pump, which draws water and pushes it through the VACC300's multifunctional raw filtration system, includes:3filter cartridge housings
ရေကိုဆွဲတင်ပြီး VACC300 ရေစစ်ထုတ်စနစ်ဆီကို ပို့ပေးတဲ့ ရေစုပ်စက်မှာ ရေစစ်ကိရိယာတောင့်အိမ် ၃ ခုပါဝင်ပါတယ်။
+ A multifunctional filter cartridge housing consists of 20 pieces of 20” filter cartridge and 20 pieces of 20” filter housing utilizes chemical process to remove alum, impurities, organic matter, and heavy metals from the water and balances pH amount remained at the secondary filtration tank.
စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်မှာ ၂၀ လက်မ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် အခု ၂၀ နဲ့ ၂၀ လက်မ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် အခု ၂၀ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေက ရေမှ ကျောက်ချဉ်၊ အညစ်အကြေး၊ ဓာတုပစ္စည်းများ၊ လေးလံတဲ့ ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး နောက်ထပ် စစ်ထုတ်ကိရိယာ တိုင်ကီမှာ pH ပမာဏကို ညှိပေးပါတယ်။
+ Adsorption filter cartridge housing: mainly uses high-grade activated carbon to remove odors, colors, organic compounds from the water and clear it.
ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်အိမ်- အဆင့်မြင့်ကာဗွန်ကို သုံးပြီး ရေမှ အနံ့အသက်တွေ၊ အရောင်တွေ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ရေကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။
+ Softening filter cartridge housing: Utilizes USA Cation Resin to remove dissolved minerals in the form of Calcium (Ca) from the water to make it softener and pure, protect RO membrane from being clogged.
ရေကိုပျော့ပျောင်းစေသော စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်အိမ်- USA ကပ်ရှင်အစေးကို အသုံးပြုပြီး ရေမှာ ကယ်စီယမ်အဖြစ် ပျော်ဝင်နေသော သတ္တုဆားများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ပျော့ပျောင်းသန့်ရှင်းစေကာ RO အလွှာပါးကိုလည်း မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
After being primarily treated at the multifunctional raw treatment system , the water will flow into the fine filtration system, with the filter slot size of5micro meters for odor removal before it is sent to the middle tank.
အစိမ်းတွေကို ပြုပြင်ပေးတဲ့ စနစ်မှာ ပထမဆုံး ပြုပြင်ပြီးနောက် အလယ်တိုင်ကီကို မပို့ခင် ရေက အဆင့်မြင့် စစ်ထုတ်ပေးတဲ့ စနစ်ဆီသို့ ၅ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားနဲ့ အနံ့အသက်ဖယ်ရှားဖို့ စီးဆင်းပါလိမ့်မယ်။
2. Heavy metal, bacteria removal
၂။အရွယ်ကြီးသော သတ္တု၊ ဘက်တီးရီးယား ဖယ်ရှားခြင်း
From the middle tank, the water will be pumped intoafine filter with the filter slot size of 1 micro meters. The water is then pumped into the Reverse osmosis membrane. The fine filter is important to remove any external sedimentation and protect the membrane from being damaged, from which prolonging the shelf life of the filtration system and ensure the best water quality.
အလယ်တိုင်ကီမှ ရေကို ၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားနဲ့ အဆင့်မြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာဆီသို့ စုပ်တင်ပေးပါမယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် ရေကို ပြောင်းပြန်စိမ့်ဝင်ခြင်း အလွှာပါးဆီကို စုပ်တင်ပါမယ်။ အဆင့်မြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာက ပြင်ပက အနယ်တွေကို ဖယ်ရှားရန်၊ ရေစစ်ထုတ်စနစ်ကြာရှည်ခံဖို့ အလွှာပါးကို မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ရန်၊ ရေရဲ့ အရည်အသွေးက အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် အလွန်အရေး ပါပါတယ်။
Withavery small size of only about 0.0001 micrometers, the RO membrane is capable of removing up to 99.99% of heavy metals, bacteria, viruses and organic compounds remaining in the water. Finished water is purified water that will be stored in the storage tank. Waste water will be discharged from the system.
၀.၀၀၀၁ မိုက်ခရိုမီတာ အရွယ်အစားလောက်သာရှိပြီး အလွန်သေးငယ်တဲ့အတွက် RO အလွှာပါးက ကြီးမားတဲ့ သတ္တုတွေ၊ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်တွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ၉၉.၉၉%အထိ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်မှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ရတဲ့ ရေက တိုင်ကီထဲမှာ သိမ်းထားမယ့် သန့်စင်ထားတဲ့ ရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးမလိုတော့တဲ့ရေတွေကိုတော့ စနစ်ကနေ ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Although RO Dow membrane can remove almost all toxic heavy metals, with special mechanism, they still retain necessary natural minerals for the human body like Na +; K +, etc.
RO Dow အလွှာပါးက စပါယ်ရှယ် စက်ယန္တရားနဲ့ အဆိပ်ဖြစ်စေတဲ့ ကြီးမားတဲ့ အရာဝတ္ထုအားလုံးလိုလိုကို ဖယ်ရှားနိုင်ပေမယ့် Na+,K+ စတဲ့ လူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ သဘာဝဓာတ်တွေကိုတော့ ထိန်းသိမ်းပေးထားပါတယ်။
Sterilization isavery important step in the water filtration process. That is the reason why VACC300 pure water filtration line is equipped with Ozone to disinfect and kill all bacteria remaining in the water.
ပိုးသတ်ခြင်းဆိုတာ ရေစစ်ထုတ်ခြင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက
VACC300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးသောလိုင်းမှာ ရေထဲမှာ ရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို သတ်ဖို့ အိုဇုမ်းကို တပ်ဆင်ထားရခြင်း အကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ်။
VACC 300 is also equipped withafine filter to keep sediment generated at the storage tank. It also acts asabarrier protecting the UV antibacterial lamp from being broken.
VACC300 ကို သိုလှောင်တဲ့ တိုင်ကီမှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ အနည်တွေကို သိမ်းထားဖို့ အဆင့်မြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒါက UV ဘက်တီးရီးယားမပါသော အလင်းရောင်ကို ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ အဟန့်အတားအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
Unlike other conventional water filtration products in the market that only use the single sterilization, VACC300 system utilizes double sterilization method with UV light to enhance bacteria control, sterilize twice.
ပိုးသတ်ပေးခြင်းတစ်ခုပဲသုံးတဲ့ ဈေးကွက်က အခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ မတူတာက VACC300 စနစ်က ဘက်တီးရီယားတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးဖို့ UV အလင်းရောင်နဲ့အတူ နှစ်ဆပိုးသတ်ပေးပါတယ်။
The dead bacteria killed by UV light will be moved out through the bacteria filter with the filter slot size of 0.2 micro meters. With this bacteria filter, killed bacteria will be moved out through the waste water drainage. There will be no dead bacteria remaining in the distribution. This is the an outstanding feature of Viet An's purified water treatment and filtration products compared to other industrial water purification products in the market.
UV အလင်းရောင်ကြောင့် သေသွားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ၀.၂ မိုက်ခရိုမီတာအရွယ်အစားရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာနဲ့ ထုတ်လိုက်ပါမယ်။ ဒီဘက်တီးရီယားစစ်ထုတ်ကိရိယာနဲ့ သေသွားတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ရေဆိုးမြောင်းထဲကို ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိရိယာမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ထပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါက ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေထက် Viet An မှ ရေစစ်ထုတ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ လက္ခဏပါပဲ။
Before coming to the distribution, the water will be filtered throughaspecial treatment equipment to increase sweetness and keep the natural minerals for the water.
မဖြန့်ဝေခင်မှာ ရေကို ပိုပြီးချိုရန်နဲ့ သဘာဝ သတ္တုတွေကို ထိန်းသိမ်းရန် စပါယ်ရှယ်ပြုပြင်ရေးစက်ကို ဖြတ်ပြီး စစ်ထုတ်ပါမယ်။
The water processed with this filtration system is of high-quality, satifies food and hygiene standards and helps to strengthen the body's immune system.
ဒီအရည်အသွေးမြင့် ရေစစ်ထုတ်တဲ့ စနစ်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အစားအသောက်လုံခြုံဘေးကင်းမှု စံချိန်စံညွှန်းများနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ခုခံအားကောင်းစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Notes when using VACC300 Purified water filtration system of Viet An
Viet An မှ VACC300 ရေသန့်စစ်ထုတ်ပေးသောစက်ကို အသုံးပြုသောအခါ မှတ်စုများ
To ensure stable performance and prolong the equipment’s shelf life, please note to carefully check the machinery before operating.
တည်ငြိမ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ စက်ရဲ့ ထားသိုနိုင်မှု ကြာရှည်ဖို့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မစတင်ခင် စက်အစိတ်အပိုင်းကို သေချာစွာစစ်ဆေးဖို့ ဂရုပြုပါ။
Make sure that the opening and closing valves are in the right position the turn on the pump switch to check whether the pump can work properly. Check and ensure adequate water amount to supply into the tank.
အဆို့အဖွင့်အပိတ်က နေရာမှန်မှန်ရှိနေလားသေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။ ရေစုပ်စက်က လုပ်ဆောင်နိုင်လားသိရှိအောင် ခလုတ်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ တိုင်ကီထဲသို့ ပေးပို့ရမည့် ရေပမာဏ လုံလောက်မှုရှိလား သေချာအောင် စစ်ဆေးပါ။
If noticing strange sound of the pump or inadequate water amount, remember to double check carefully.
တကယ်လို့ ရေစုပ်စက်က အသံက စိမ်းနေရင် ရေပမာဏ မလုံလောက်ရင် နှစ်ဆ ပြန်စစ်ဆေးပါ။
Pay special attention to the water amount in the filter cartridge housings to ensure the water quality at finished stage as well as shelf life of the machine.
နောက်ဆုံးအဆင့်မှ ရေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ စက်ရဲ့ သိုလှောင်နိုင်တဲ့ သက်တမ်းကို သေချာအောင် စစ်ထုတ်ကိရိယာ အိမ်မှာရှိတဲ့ ရေပမာဏကို သေချာ ဂရုစိုက်ပေးပါ။
During using process, maintain and change the filter equipment, filter cartridge, membrane system according to the manual. For more information about Viet An’s filter equipment, click here https://locnuocvietan.vn/san-pham-viet-an/day-chuyen-loc-nuoc/
အသုံးပြုနေစဉ်မှာ စစ်ထုတ်ကိရိယာ၊ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်၊ အလွှာစနစ်တို့ကို ပြောင်းပါ။ စစ်ထုတ်ကိရိယာတွေအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန်
What should I prepare to openabottled pure water production and business establishment?
ရေသန့်ဘူး ထုတ်လုပ်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်ဆောင်ဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ထားရမလဲ?
What are the standards for bottled water?
ရေဘူးတွေအတွက် စံချိန်စံညွှန်းက ဘာတွေလဲ?
Experience in manufacturing and trading bottled water.
ရေဘူးများ ထုတ်လုပ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး အတွေ့အကြုံ
Quotation for bottled water filtration line
Is it safe to use well water for pure water production?
တွင်းရေကို ရေသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုဖို့ စိတ်ချရရဲ့လား?
Once you have decided to choose this VACC300 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
တကယ်လို့ ဒီစက်ကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် တစ်နာရီမှာ ၂၀ လီတာပုလင်း ၃၅-၆၀၊ ၅၀၀ မီလီလီတာဘူး ၁၅၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်သော စတိန်းလက်စတီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားသော လောင်းဖြည့်စက်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
You can also invest 1 semi-automatic membrane shrinking machine with the capacity of 150-200 bottles/h, 250-350 bottles/h The machine can be used to wrap membrane onto the bottles and jars with many different temperature levels, depending on using demands. The machine can be either produced by Viet An or imported from Italy, America, Germany, Japan, Korea, etc. at your requests.
တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၁၅၀-၂၀၀၊ ၂၅၀-၃၅၀ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော တစ်ဝက်အလွှာပါးကို ရှုံ့ပေးသောစက်ကို ရင်းနှင်းမြုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ စက်ကို လိုအပ်တဲ့ အပူချိန်လယ်ဗယ်အလိုက် ဘူးတွေ ပုလင်းတွေပေါ်မှာ အလွှာပါးကို ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စက်ကို Viet An မှလည်း ထုတ်လုပ်သလို အီတလီ၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား စသည်တို့မှလည်း တင်သွင်းပါတယ်။
1 Push pump with 304 Stainless steel head 304 စတိန်းလက်စ်စတီးခေါင်းပါသော တွန်းအားရေစုပ်စက် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ် 1 pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ 1 pc VA/ USApec
12 Auto valve အော်တို အဆို့ 1 pc VA/ USApec
14 20 Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 1 pc VA/ USApec
15 20 Filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
16 304 stainless steel booster pump 304 စတိန်းလက်စ်စတီး ဓာတ်အားပြင်း ရေစုပ်စက် 1 pc Ebara/ Pentax-Italy
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ် 1 pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး 1 pc Hitech-USA/CSM Korea
19 Flowmeter စီးဆင်းသောမီတာ2pc Taiwan
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ3pc Taiwan
25 UV lamp UV မီးအိမ် 1 pc Poland/ Hungary/ USA
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက် 1 pc VA/ USApec
27 10 Filter housing ၁၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့် 1 pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 300 300LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်